शान्तिपूर्ण एवं उत्साहजनक तवरले मतदान जारी, बिहान १०ः०० बजेसम्म करिव २५ प्रतिशत मतदान ः र्निवाचन आयोग
काठमाडौं, असार १४ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि मतदान जारी रहेको छ । जारी मतदानमा अहिले बिहान १०ः०० बजेसम्म करिव २५ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको र्निवाचन आयोगले जनाएको छ ।
आज मतदान भइरहेका कूल ८,३६४ मतदान केन्द्रमध्ये विहान वर्षात्का केहीबेर ढिलो मतदान शुरु भएका केही केन्द्रहरूमा समेत अहिले उत्साहजनकरूपमा मतदान कार्य जारी रहेको छ । विहान ७ बजे शुरु भएको मतदान कार्य अपरान्ह पाँच वजेसम्म जारी रहने छ । मतदानसम्बन्धी थप विवरणहरू प्राप्त हुनासाथ आयोगले सार्वजनिक गर्दै जाने र्निवाचन आयोगका प्रबत्ता एवं सहसचिब सुर्यप्रसाद शर्माद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोगद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ स्थानीय तहहरुका मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्थापन गरी स्थानीयस्तरमा नै त्रिपाल लगायतका सामग्री र मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय नागरिक समाजलगायतबाट प्राप्त सहयोगप्रति आयोग धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
वैतडी जिल्लाको सुरनया गाँउपालिकाको भूमिराज नि.मा.वि. मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे ११३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक पशुपति साउदले मतदान गर्नुभएको छ । त्यसैगरी दार्चुला जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकाकी जेष्ठ नागरिक १०५ वर्षीय कलशी भट्टले भूमिराज नि.मा.वि., तौकी मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गर्नुभएको छ ।
दोस्रो चरणमा १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका, २१५ गाँउपालिकामा गरी १५ हजार ३८ प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनेछन् । यसमध्ये ४१ जनप्रतिनिधि भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
स्थायी सरकारका अस्थायी मन्त्री, किन काण्डमा फस्दैछन् मन्त्रीहरु ?
प्रजातन्त्रका लागि पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको छ– सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसले धादिङमा चेपाङलाई दियो वडा सभापतिको जिम्मेवारी
मुख्यमन्त्री भट्टद्वारा राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे जानकारी
‘एकअर्कालाई नसहने बानीले काँग्रेस पछि परेको हो’ : डा महत
दुई अध्यक्षबीच समसामयिक विषयमा छलफल
एमसीसी फिर्ता नलगे सडकमा आउने चेतावनी : सीपी गजुरेल
नेकपा सचिवालयः एमसिसीबारे छलफल
काँग्रेसलाई जीवन्त राख्न महाधिवेशन आवश्यक : नेता कोइराला
कार्यकर्ताको दबाबले पार्टीभित्रको व्यक्तिवादी सोच मत्थर हुँदै गएको छ : नेता महत
कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले गरे जिल्ला भ्रमण तय,कहिेले कुन जिल्लामा ?
डिल्लीबजार कारागारबाट महराको भव्य बिदाई, हेर्नुस तस्वीरहरु